Mapfupi eApple TV yako yausingagone kurega kuva | IPhone nhau
Shortcuts zveApple TV yako yausingagone kurega kuva nayo
Luis Padilla | | iOS 14, Zvidzidzo uye zvinyorwa
IOS 14 inomiririra shanduko yakakosha muPfupiso nesarudzo itsva dzatinogona kusanganisira, majeti uye app yeApple Watch. Isu tinokuratidza mamwe mapfupi eApple TV yako ayo anokufarira zvechokwadi.
Shortcuts yanga iri imwe yezvakanyanya kuwedzerwa kuIOS mumakore achangopfuura, asi vashandisi vazhinji havana kana kumbogadzira kuti vagadzire imwe. Ichokwadi kuti michina yakaoma kunzwisisa inogona kuitwa nemabasa asingaverengeki akabatanidzwa, asi mamwe akareruka anogona kuitwa uye kuti vane mibairo yakanaka kwazvo. Kuuya kweIOS 14 kunotiunzirawo mikana mitsva nekuda kwekuti tinogona kuisanganisira mumaWidgets ayo atinogona kuisa pachiratidziro chedu chekumusha kuti tiamhanye, uye kuti tinogona kumhanya navo kubva kuApple Watch tichitenda kune iyo nyowani Shortcuts app iyo inosanganisirwa muApple wachi.
Iwe une Apple TV here? Iwe une mwenje unoenderana neKeKKit? Fungidzira uchibatidza yako Apple TV, terevhizheni yako, kuvhura iyo app yaunoda uye kumisikidza mwenje mumba mako yekutandarira kusvika pakukora uye nemuvara waunofarira zvakanyanya kunakidzwa nefirimu yakanaka kana akateedzana. Uye zvino fungidzira uchiita zvese izvo nekudzvanya bhatani rimwe pane yako iPhone, kana pane yako Apple Watch. Fungidzira zvakatowanda, kudzora zvese kubva kune yako iPhone kana yako Apple Watch pasina kutsvaga Siri Remote iyo yakanyatsotsvedza pakati pemasofa esofa.
Zvese izvi zvinogona kuitwa zviri nyore kwazvo kuburikidza neiyo Shortcuts application nekutevera nhanho dzinoratidzwa muvhidhiyo, kwaunogona zvakare kuona chaizvo izvo zvinoita iyo nzira pfupi. Kugadzirwa kweimwe neimwe yematanho anoitwa uye kumisikidzwa kwemiparamende yavo kwakatsanangurwa muvhidhiyo, saka iwe unogona kugadzira yako pfupi nzira uye wochinjisa kune ako zvishandiso. Zvese kuti zvishande unofanirwa kuve neIOS 14 uye watchOS 7 yakaiswa pamidziyo yako.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Shortcuts zveApple TV yako yausingagone kurega kuva nayo
Apple kuvhura bundled service package inonzi "Apple One"
Tweetbot 5 inowedzera trackpad rutsigiro uye dzimwe nhau